NetBeans 12.3 Inosvika neiyo Yakazara PHP 8 Tsigiro, Dzidzo uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
NetBeans 12.3 inosvika iine yakazara PHP 8 rutsigiro, inogadziridza uye zvimwe
1 NetBeans 12.3 Main Zvitsva Zvimiro
2 Maitiro ekuisa Apache NetBeans 12.3 paLinux?
NetBeans 12.3 Main Zvitsva Zvimiro
Mune iyi vhezheni nyowani yeNetBeans 12.3 zvinojekeswa kuti iyo Zvishandiso zvekuvandudza zveJava uye kushandiswa kweSeva Server Protocol server (LPS) yakawedzerwa kudzoreredza mashandiro panguva yekumisikidza, peta mabhuroko mukodhi, ona zvikanganiso mukodhi, uye gadzira kodhi, pamwe akawedzera JavaDoc kuratidza paunenge uchifamba pamusoro pemabatiro.
Imwe shanduko yakakosha inouya mushanduro iyi nyowani ndeyekuti rutsigiro ruzere rwePHP 8 syntax yaitwa, kunyangwe hazvo zvataurwa kuti Autocompletion yemazita hunhu uye paramende haisati yagadzirira izvozvi.
Ukuwo, NetBeans yakavakirwa-mukati Java compiler nb-javac (javac yakagadziridzwa) yakagadziridzwa kuNbjavac 15.0.0.2, iyo inogoverwa kuburikidza neMaven, pamwe nekuyedzwa kweJDK 15 yakawedzerwawo pamwe nekuvandudzwa kwekutarisa kwema worksheet mune makuru Gradle mapurojekiti.
Nezve izvo zvakagadziridzwa zvakaitwa, tinogona kuona kuti raibhurari inotevera yakagadziridzwa: FlatLaf kubva pa0.31 kusvika ku1.0, Groovy kubva pa2.5.11 kusvika ku2.5.14, JAXB kubva pa2.2 kusvika ku2.3. kubva 5.5.1 kusvika 5.7.0 uye JUnit kubva 2.3.1 kusvika 2.4.4.
Bhatani rakawedzerwa kubha remamiriro ekushandura vhezheni yePHP inoshandiswa muprojekti. Yakagadziridzwa rutsigiro rweMunyori mapakeji.
Iko kugona kwekushanda pamwe nekutyora mabhureki mu debugger kwakagadziridzwa.
Inoenderera mberi kuvandudzwa kweC ++ Lite, nzira yakareruka yekukudziridza muC / C ++ mitauro.
Yakapedzwa uye yakawedzera CPPLite debugger nerutsigiro rwekupaza, shinda, akasiyana, maturu ekushandisa, nezvimwe.
Favorite Tasks chikamu chawedzerwa kune Gradle Navigator.
Yakagadziridzwa vhezheni FlatLaf 1.0, Groovy 2.5.14, JAXB 2.3, JGit 5.7.0, Metro 2.4.4, JUnit 4.13.1.
Kuchenesa kodhi kwese kwaitwa.
YeCSS, mushandisi interface inovharira pane isina magwaro zvivakwa
Yakagadzirisa kuverenga kweHTML kodhi yekupedzisa zvinhu
Gadzirisa kubata kwepasirese tsika
Gadzirisa npm logo saizi
Maitiro ekuisa Apache NetBeans 12.3 paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuwana iyi nyowani vhezheni, ivo vanofanirwa kurodha pasi sosi kodhi yekushandisa iyo yavanogona kuwana kubva pane iyi link iripazasi.
Uye kubva kuchiteshi tirikupinda dhairekitori iri kuti gare gare tiite zvinotevera kuvaka Apache NetBeans IDE:
Paunenge wavakwa iwe unogona kumhanya neiyo IDE nekunyora iwo unotevera kuraira:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » NetBeans 12.3 inosvika iine yakazara PHP 8 rutsigiro, inogadziridza uye zvimwe
7-Zip inouya kuLinux, makore makumi maviri mushure mekuigadzira paWindows, asi kwete sezvaunotarisira
Iyo Powder Toy: yakasarudzika "inodonha jecha" vhidhiyo mutambo weLinux